Bogga ugu weynQurxinta EygaTababarka EygaTalooyin ah in Had iyo jeer niyada lagu hayo Marka Tababarka Eyda 2022
Qurxinta EygaTababarka EygaEeyaha Daryeel
Talooyin aad mar walba niyada ku hayso marka aad tababarayso Eyda
1. Noqo mid joogta ah
2. Ku ilaali madadaalo iyo cadaalad
3. Ammaan, ha cadaabin
Waa maxay waxa ugu horreeya ee aan baro ilmahayga?
Waa maxay saddexda hababka tababarka eeyga aasaasiga ah?
Waa maxay 7-da sare amarada tababarka eey aasaasiga ah?
Talooyin Tababarka Eyda Caawinta leh ee 8 ee ugu sarreeya?
Muxuu qabtaa kuleetiga tababarka eeyga naxdinta leh?
Xirmooyinka shoogga ee tababarku ma u fiican yihiin eeyaha?
Eyda gariirku ma shaqeeyaan?
Ma yihiin qooryaha tababbarka eeyga shoogga ku habboon eeyaha?
Xirmooyinka tababarka eyda gariiraya miyay waxyeello u leeyihiin eyda?
Eyda gariiraya ma shaqeeyaan?
Xirmooyinka tababarka eyda gariiraya miyay sharci darro yihiin?
Waxaa jira tillaabooyin badan oo lagu tababarayo eygaaga. Laakiin tallaabada ugu horreysa had iyo jeer waa inaad hubiso inaad leedahay dulqaad iyo waqti aad ugu hurto eeygaaga. Waa inaad mar walba maskaxda ku haysaa in marka eeyaha la tababarayo, waa inaadan waligaa u isticmaalin ciqaab jidheed ama mid hadal ah nooc tababar ah.
samir; joogteeyo; u naxariiso
U samir horumarka eygaaga
La soco hababka tababarkaaga
U naxariiso eeygaaga
Ka hor inta aynaan u galin madax-madaxeedka adduunka sixirka ah ee tababarka eyda, halkan waxaa ah tabo ay tahay in tababare eey kastaa uu maskaxda ku hayo bilowga hore.
Talooyinkan waxaa loo isticmaali doonaa tallaabo kasta oo ka mid ah tababarka eygaaga waana in lagu celceliyaa inta lagu guda jiro habka tababarka si aadan fariin khaldan ugu dirin eygaaga.
Marka aynu ka hadalno inta jeer ee hab-dhaqanka eyga, laba ikhtiyaar oo keliya ayaa jira: had iyo jeer ama waligaa. Haddii aadan rabin in eeygaaga uu kugu soo boodo markaad dibadda joogtid oo dhoobada ku ciyaaraysa, waa inaadan u oggolaan inuu kugu boodo markaad guriga ku nasanayso.
Ilaalinta xeerarka joogtada ah waxay ka hortagtaa jahawareer ku saabsan waxa eygaagu awoodo iyo waxa aanu samayn karin.
Tababarka eygu waa, xaalado badan, sida wax baridda ilmaha. Barashada nasasho la'aanta waxay noqotaa walaac iyo xiiso la'aan. Ha u ogolaan eygaagu inuu lumiyo xiisaha, oo iska hubi inaad siiso nasasho marka ay tahay wakhtiga joojinta.
Mid ka mid ah dariiqo aad ku ilaalin karto eygaaga xiisaha iyo nasashada waa inaad ciyaarto ciyaaraha xilliga nasashada, sida soo celinta walxaha la tuuray iyo is jiid jiidka.
Haddii eygaagu u muuqdo mid daalan, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inaad siiso fursad uu ku nasto ka hor kulanka tababarka xiga. Ku haysashada madadaalo iyo in aad haysato qol ku filan oo aad ku wareegtid waxay hubin doontaa in eeygaagu ku caajiso tababarka maalinta.
AKHRI: Caafimaadka Xayawaanka: Muhiimadda Baaritaannada Joogtada ah & Intee Jeer ayay tahay inuu Xayawaankaagu Booqdo?
Si cadaalad ah u ilaali tababarka adiga oo u sheegaya eygaaga inuu si sax ah u ogaado waxaad rabto inuu sameeyo. Marka uu ku dheggan yahay, waxaad ka shaqayn kartaa faahfaahinta marka uu fahamkiisu sii kordho.
Habka ugu wanaagsan ee tan lagu gaari karo waa in la jebiyo jimicsi kasta tillaabooyin yaryar.
Tusaale ahaan, haddii aad isku dayayso inaad barato eygaaga "inuusan dhaqaaqin," waxaa laga yaabaa inaad waalan tahay inaad filayso in isku dayga ugu horreeya, eeygaagu uu sii joogi doono inta aad qolka ku socoto.
Taa beddelkeeda, waxaan u baahannahay inaan wax yar ka qaadno, hortiisa istaagno, ka dibna dhowr ilbiriqsi sugno oo si tartiib tartiib ah u kordhinno masaafada iyo waqtiga marka uu ka gudbo imtixaankan yar.
Eygaagu wuxuu si fiican u fahmi doonaa waxa laga filayo inuu sameeyo, ka dibna waxyaabo kale ayaa lagu dari karaa tababarka si ay u sii adkeeyaan, sida alaabta lagu ciyaaro ama waxyaabo kale si ay isaga mashquuliyaan.
Milkiilayaasha eyda waxay inta badan diiradda saaraan saxitaanka khaladaadka eyga laakiin way ka yar yihiin inay ammaanaan marka ay sameeyaan waxa saxda ah. Haddii eygaagu si deggan u jiifo dhulka, waa inaad u sheegtaa inuu si fiican u dhaqmayo.
Xitaa inta lagu jiro tababarka, sii eygaaga wax yar oo abaal-marin ah ama dhiirigelin jacayl marka uu si sax ah u qabto hawsha.
Ha cadaabin marka uu fahmi waayo waxaad rabto inuu sameeyo. Haddii eygaagu garan waayo waxa uu ku qaldan yahay oo la ciqaabo, waxay kuu horseedi doontaa jahawareer iyo kalsooni darro ka dhex dhalata eeygaaga iyo adiga, mulkiilahaaga.
Abaalmarinta daawaynta dhadhan fiican leh ayaa ah habka ugu badan ee abaal marinta eyda loo tababaro.
Ku xidhidhaynta daawaynta yar iyo habdhaqanka saxda ah waxay ku kicinaysaa eygaaga inuu ku celiyo isla dhaqankii. Tani waxay wanaajin doontaa hab-dhaqanka eygaaga guud ahaan, iyo xataa daawaynta la'aanteed, waxaad weli ku dhiirigelin kartaa eygaaga siyaabo kale, sida madaxa oo aad salaaxdo ama siiso "wiil wanaagsan."
AKHRI: 11ka Ey ee ugu Caansan Ameerika 2022
Collars tababbarka eeyga ayaa si wax ku ool ah u wanaajin kara hufnaanta tababarka eyga, daryeelka eyga guriga saamaynta tababbarka eeyga waa mid weyn! Fadlan booqo website-kan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kuleejka tababarka eeyga.
Ilmaha aan qaan-gaarin waxay leeyihiin feejignaan gaaban, laakiin waxaad filan kartaa inay bilaabaan inay bartaan amarrada addeecista fudud sida "fadhiiso"Dgaar ah, ""joog, "intii ay da'doodu u dhaxayso 7 ilaa 8 toddobaad.
Tababarka eyga saxda ah ayaa dhaqan ahaan dib loo dhigay ilaa da'da 6 bilood. Dhab ahaantii, marxaladan hore waa wakhti aad u liidata si aad u bilowdo tababarka ilmahaaga.
In kasta oo ay u muuqan karto jahawareer marka hore, dhammaantood waxay ku soo ururaan saddex farsamooyin aasaasi ah: maamul dhaqameed, xoojin togan iyo saynis-ku-salaysan.
Si aad u noqoto canine wanaagsan, eey si fiican u dhaqmaan waa in uu ka jawaabaa oo adeecaa todobada tilmaamood: fadhiiso, Down, joog, Kaalay, Ciribta, Off, Iyo Maya.
Sare 8 Haqoon leh Dog Talooyinka Tababarka?
Had iyo jeer maskaxda ku hay Qodobadan marka aad tababarayso Eyda 2022
Talada 1: Si taxaddar leh u dooro Magaca Eeygaaga.
Talada 2: Samee Xeerarka Guriga.
Talada 3: Samee god gaar ah.
Talada 4: Ka caawi Eygaaga Nasashada.
Talada 5: Abaalmarinta Dhaqanka Wanaagsan.
Talada 6:: Bar Eeygaaga inuu yimaado marka loo yeero.
Talada 7: ku tababar "Waqtiga Eyga"...
Talada 8: Ka ilaali eygaada inuu isla markiiba boodo.
In kasta oo ay u muuqan karto jahawareer marka hore, dhammaantood waxay ku soo ururaan saddex farsamooyin aasaasi ah: xukunka dhaqanka, xukunka sayniska, iyo xoojinta togan.
Tababbarrada naxdinta leh waxay isticmaalaan calaamadda raadiyaha si ay ugu soo diraan kicinta iftiinka iyada oo loo marayo marinka fog (trаnsmitter) si uu u samatabbixiyo si uu u dareemo dareenkaaga neerfaha. Kicinta waxaa loogu talagalay in lagu soo jiido fiirsiga eeyga si uu u caawiyo dib u soo saarida eeyga.
Shuqullada shoolada aad uga waxtar badan ma aha talinta bini'aadminimada. Iyadoo qiyaasaha ku salaysan dib-u-celinta ay wax ka bedeli karaan hab-dhaqanka eygaaga, cilmi-baarayaashu waxay muujiyeen in wax-soo-saarka, abaal-marin-ku-taalladu ay waxtar leedahay. Shilintu waxay wax u dhimi kartaa eygaaga.
Kuleelaha tababarka eyga gariiraya ma waxyeeleynayaa eygeyga? Maya! Gariirada gariiraya waxay si fudud u soo diri doonaan qoorta eeyga. Ma boodboodi doonaan oo ma isticmaali doonaan Fido raam.
Collars Shock kama waxtar badna barista bini'aadminimada. Iyadoo tallaabooyinka ciqaabta ku salaysan sida feerka feerka ay bedeli karaan hab-dhaqanka eyga, cilmi-baaristu waxay muujisay in tababbarka togan, abaal-marin-ku-saleysan uu si la mid ah waxtar u leeyahay. Kuleejyada saamaynta leh waxay dhaawici karaan eygaaga.
Qoorta gariiraysa ma wax yeeli doontaa eyga? Maya! Kuleejyada gariiraya waxay si fudud u soo diri doonaan dareen guuxa qoorta eeyga. Ma naxdin doonaan mana keeni doonaan eygaaga wax xanuun ah.
Kuleejyada gariiraya waxaa loo yaqaanaa inay yihiin xal badbaado leh oo dabacsan si loo xakameeyo ciyinka xad dhaafka ah ee eeyaha. Laakiin dhab ahaantii ma shaqeeyaan? Haa, Kuleejyadani waxay shaqeeyaan haddii aad si sax ah u isticmaasho.
Eyda gariiraya qooriyeyaashan waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa siyaabo kale waxayna gacan ka geysan karaan hagaajinta xiriirka ka dhexeeya eyga iyo milkiilihiisa.
Marka laga reebo isticmaalka gariirada eeyaha ee tababarka eeyaha dhegaha la', oo ay taageerto Dogs Trust, ayaa si adag loo nidaamin doonaa. Kaliya Westminster ayaa xaddidi karta iibinta qalabkan UK oo dhan.
Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay maqaalkan… Maxay yihiin fikradahaaga Talooyin ah in Had iyo jeer niyada lagu hayo Marka Tababarka Eyda 2022!
Bal aan ku ogaano fikradahaaga qaybta bandhigyada. Xor baad u tahay inaad nagula wadaagto qaybta faallooyinka ee hoose.
Views Views: 3,239
Collar tababarka eey
talooyinka tababarka eyga
sida loo tababaro eeyahaaga
gariiraya koolada tababarka eyda
article Previous10ka ugu sarreeya Hagaha Treadmill Ey iyo Dib u eegis (2022)
Next articleEyda ma la siin karaa khudaar? 9 khudaar iyo miro sun u ah eyda